Dad lagu laayey Jamhuuriyadda Koongo - BBC News Somali
Image caption Khariidadda Koongo
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay iska hor imaad ku dhex maray bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Koongo, ciidanka iyo fallaago loo malaynayo in ay ka yimaadeen Uganda Axaddii, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Nin ka madax ah urur bulsheed rayid ah oo maxalli ah ayaa AFP u sheegay in "Sideed qof oo rayid ah la toogtay, askari iyo qof kale oo loo malaynayo inuu ka tirsanyahay mitidiinta ADF ayaa iyagana la dilay".
ADF, waa koox reer Uganda ah oo Isaamiyiin ah, oo ku kacsan dowladda madaxweyne Yoweri Museveni, waxaanay gobolkan ka dhaqdhaqaaqayeen mudo labaata sano ah.
Dowladda iyo Qaramada Midoobay ayaa kooxda ku eedeeday in ay masuul ka tahay qalalaasaha soo noqnoqonaya ee gobolka ka taagan.
Sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch, ku dhawaad 700 oo rayid ah ayaa lagu dilay xasuuqyo dhacay labadii sanadood ee la soo dhaafay, waxaanay sheegtay hay'addu in aanay caddayn cidda weeraradaa ka dambaysaa.